धर्तीका कुनैपनि शक्तिले MCC पास गर्न स’क्दैनन् : झलनाथ खनाल (भिडिओ सहित),,हेर्नुहोस! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
धर्तीका कुनैपनि शक्तिले MCC पास गर्न स’क्दैनन् : झलनाथ खनाल (भिडिओ सहित),,हेर्नुहोस!
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का बरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नेपाल अत्यन्तै अ’स्थिर भएको बेलामा र सबै पक्षसँग छलफल नगरी एम’सिसी सम्झौता भएकोले नेपालमा यो सर्वाधिक विवादको सम्झौता बनेको स्प’ष्ट पारेका छन् ।
सोमबार राति प्रा’इम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा प’त्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले य_स्तो बताएका हुन् ।
उनले अघि भने,’यो सम्झौतामा नलेखिएपनि एमसिसी ईण्डो प्यासिफिक स्टाटेजीकै एउटा अंग हो भनेर अमेरिकी नेताहरुले पटक पटक बोलिरहेका छन् । य’सलाई हामीले बेवास्ता गर्न सक्दैनौं । दोस्रो कुरा भनेको एमसिसी सम्झौताकै धेरै प्रा’वधानहरु आ’पत्तिजनक छन् ।
अ’पमानजनक छन् । नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न उठ्ने खालका छन् । त्यसो हुनाले हाम्रो पार्टीले गम्भिर रुपमा बहस गरेको छ । केन्द्रिय कमिटीको दोस्रो बैठकले कार्यदसमेत बनायो । कार्यदले एउटा रि’पोर्ट दिएको छ । त्यो रिपोर्टको बारेमा पार्टीले अ’हिलेसम्म छलफल नै गरेको छैन् । पार्टीले छ’लफल नै नगरी यो पारित हुने कुराको त कल्पनै नगर्नुहोस् ।’
जबसम्म नेकपाले के गर्ने भन्नेबारे एउटा टुँगोमा पुग्दैन त्यतिबेलासम्म कसैले भनेर यो पास वा फेल नहुनेपनि उनको दाबी छ । उनले थपे,’कमरेड केपी शर्मा ओली नेकपाको अध्यक्ष हो । नेकपाको सर्वेसर्वा होईन । उहाँले जे बोल्यो त्यही हुन्छ भन्ने कुरा छैन् । उहाँले बोल्ने कुरापनि पार्टीको एउटा भ्वाईस हो । पार्टीको एउटा भ्वा’ईस होला ।
पार्टीका विभिन्न क’मरेडहरुको भ्वाईस होला । तर, यो पार्टीको भ्वा’ईस भनेको के’न्द्रीय कमिटीको भ्वाईस हुन्छ । स्थायी समितिको भ्वाईस हुन्छ । सचिवालयको भ्वाईस हुन्छ । अहिलेसम्म कार्यदलको रिपोर्टमा खो’ई छलफल गरेको ? सबभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीले यो छ’लफल गराउनुपर्दैन् ? पार्टी कमिटीमा रा’खेर छलफल गराउनुपर्दैन् ? त्यस’बारेमा निर्णय गराउनुपर्दैन् ।
पार्टीको निर्देशनबिना उहाँले पास गराउँछु भनेर पास हुन्छ ? पास हुँदैन् । त्यसो भएको हुनाले ज’बसम्म नेकपा ना’मको यो गौरवमय पार्टीले संस्थागत रुपले निर्णय गर्दैन्, तबसम्म यो धर्तीका कुनैपनि शक्तिले यो पास गर्न सक्दैन् ।’
उसो भए प्रधा’नमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहेरपनि एमसिसी पारित हुनसक्दैन त भन्ने धमलाको अर्को प्रश्नमा उनले भने,’कसैले चाहेरपनि हुँदैन् । ने’कपाले चा’हनुपर्छ । नेकपाले चाह्यो पास हुन्छ । नेकपाले चाहेन, पास हुँदैन् ।
Previous नेपालमा न कोहीँ भोको रहन्छ त न कोहीँ भोकले नै मर्छ , दुईतिहाईले सबैको रक्षा गर्छौं:ओली,,हेर्नुहोस!
Next “कोरोना लागिहाल्यो भने हाच्छ्युँ साच्छ्युँ गर्नुपर्छ, तातोपानी खानुपर्छ, उडाइदिनुपर्छ”:ओली